प्रधानमन्त्री ओली आफैले कोरोनाबारे यतिसम्म भ्रम फैलाएको खुलासा, चाैतर्फी आलोचना सुरु — Imandarmedia.com
प्रधानमन्त्री ओली आफैले कोरोनाबारे यतिसम्म भ्रम फैलाएको खुलासा, चाैतर्फी आलोचना सुरु
काठमाडौं । कोरोना भाइरसबारे भ्रामक प्रचार नगर्न सरकारले आग्रह गर्दै आइरहेको छ । विश्व स्वास्थ संगठन लगायतका आधिकारिक संस्थाका सूचनामा मात्र भर पर्न सरकारले सचेतना जगाउँदै आएको छ । तर, स्वयं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नै कोरोना भाइरस संक्रमणबारे ‘भ्रम’मा परेको पाइएको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले दुई दिनअघि सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूसँग भिडियो बैठक गरेका थिए । कोरोना महामारीविरुद्ध प्रदेशहरुमा भइरहेका काम र भोग्नुपरेका समस्याबारे प्रधानमन्त्रीले ब्रिफिङ लिएका थिए । मुख्यमन्त्रीहरूसँगको आन्तरिक बैठकको भिडियो सार्वजनिक भयो, जहाँ प्रधानमन्त्री ओलीले कोरोना भाइरस सर्ने विषयमा केही अर्धसत्य एवं भ्रमपूर्ण धारणा राखेका छन् ।
मुख्यमन्त्रीहरुसँगको बैठकमा प्रधानमन्त्रीले भाइरसको विशेषताबारे बताएका थिए । भाइरस कसरी सर्न सक्छ भन्ने प्राविधिक विषयमा समेत उनले चर्चा गरे । भाइरसबाट जोगिनका लागि मास्क मात्र लगाएर नपुग्ने, चश्मा पनि लगाउनुपर्ने प्रधानमन्त्रीले सुझाव दिएका थिए । प्रधानमन्त्रीले भिडियो बैठकमा भनेका थिए, ‘म साथीहरुलाई भन्न चाहन्छु– मास्क मात्रै लगाएर पर्याप्त हुँदैन । मास्कसँगै चस्मा पनि लगाउनोस् ।’
भाइरसबारेमा प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ यस्तो थियो –
‘त्यो भाइरस भनेको निर्जीव तत्व हो । यो निर्जीव तत्वमा त्यो जुन बोसीय, बोसोजस्तो जुन फ्याटीय तत्व हुन्छ, त्यसले त्यस (भाइरस) लाई एउटा जीवित तत्वका रुपमा सक्रिय गराइदिन्छ । त्यसकारण तातोपानीको बाफ लिने, तातोपानी खाने, चिसोमा बढी जोड नदिने, आइसक्रिमजस्ता कुरा नखाने विधि ठूलो कुरा हो ।
हात धुँदाखेरि, सकिन्छ भने तातोपानीले धुने । मुख धुँदा अलिकति तातोपानी, मनतातो पानीले । यो ठूलो विधि हो । जहाँ भाइरस छ भने पनि तातोपानीले हात धुने वित्तिकै त्यो भाइरसको, त्यसको बाहिरी लियरको बोसो पग्लिएपछि त्यो त निर्जीव हो, समाप्त हुन्छ त्यहीँ । मर्ने होइन, त्यसको जुन जीवतत्वको रुपमा त्यो बाहिरी लियरको बोसीय तत्वले जे उपद्रो मच्चाउन सक्थ्यो, त्यो समाप्त हुन्छ ।
भाइसर किन मार्न सकिँदैन भन्दा निर्जीव तत्व हो, त्यसकारण । निर्जीव तत्वको, अब यो गीता ज्ञानतिर जानुपर्ने खतरा हुन्छ । यो निर्जीव तत्व हो, त्यसकारण यो निर्जीव तत्वलाई मार्न सकिँदैन । जसको जीवन छैन, त्यसलाई कसरी मार्ने ? त्यसकारण यो मर्दैन, यसलाई जीवित तत्वका रुपमा सक्रिय गर्ने इलिमेन्टहरु छन् । ती इलिमेन्टहरुबाट हामी मुक्त हुने हो ।
म साथीहरुलाई भन्न चाहन्छु– मास्क मात्रै लगाएर पर्याप्त हुँदैन । मास्कसँगै चश्मा पनि लगाउनोस् । सबभन्दा बढी छिटो सर्ने मुखबाट, त्यसपछि दोस्रो आँखाबाट सर्छ । त्यसपछि मात्रै नाकबाट सर्छ । आँखाबाट झन् छिटो सर्छ । त्यसकारण चश्मा भरसक लगाउनू वाञ्छनीय हुन्छ । अरु कुराहरु मैले धेरै भनिरहनुपर्ला जस्तो लाग्दैन ।’
विज्ञ भन्छन्– मुखपछि जोखिम भनेको नाकबाटै हो
प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइमा तथ्यगत त्रुटि रहेको विज्ञ बताउँछन् । मुखपछिको जोखिम प्रधानमन्त्रीले भनेजस्तो आँखा नभएर नाकबाट हुने जनस्वास्थ्यका विज्ञको मत छ । जनस्वास्थ्य वैज्ञानिक डा. समीरमणि दीक्षित विज्ञहरूको परामर्श वा आधिकारिक जर्नल उल्लेख गरेर बोल्न प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव दिन्छन् । डा. दीक्षित भन्छन्, ‘उहाँले बोल्नुभएको कुराले धेरैलाई प्रभाव पर्छ, त्यसकारण प्राविधिक विषयमा धारणा राख्दा सम्बन्धित विज्ञको सल्लाह लिनु उचित हुन्छ ।’
‘डाक्टरले बोल्ने कुरा प्रधानमन्त्रीको मुखबाट आयो’
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मुख्यमन्त्रीहरुसँग प्रदेशका समस्याबारे बैठकको आयोजना गरेको बताउँदै त्यस्तो बैठकमा डाक्टरबाट बोल्नुपर्ने कुरा प्रधानमन्त्रीबाट आउनु उचित नभएको प्रदेश २ सरकारका मुख्य न्यायाधिवक्ता दीपेन्द्र झाको प्रतिक्रिया छ ।
साथै मुख्यमन्त्रीसँग प्रधानमन्त्रीले गरेको बैठकको भिडियो जसले सार्वजनिक गरेको भएता पनि त्यो ‘अनइथिकल’ भएको झाले बताए । प्रधानमन्त्रीले मुख्यमन्त्रीहरुसँग गरेको भिडियो सम्वाद कस्तो हो भन्ने अनलाइनखबरको प्रश्नमा कानूनविद् झाको प्रतिक्रिया यस्तो छ–
प्रथमतः मुख्यमन्त्रीज्यूहरुसँग प्रधानमन्त्रीज्यूले त्यो बैठक कोरोनाको सन्दर्भमा के–कस्तो तयारी छ, प्रदेशमा कुनखालको सहयोग चाहिन्छ र कस्तोखालको रणनीति चाहिन्छ भन्ने विषयमा गरिएको बैठक थियो ।
सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले त्यो बैठकमा डब्ल्युएचओको प्रमुखले भन्ने कुरा अथवा निश्चित विज्ञ डाक्टरले भन्ने कुराहरु बोल्नुभयो ।
अहिलेको लकडाउनको बेला एकै ठाउँमा भौतिकरुपमा भेला हुन नसकिएको हुनाले भिडियो बैठक गरिएको हो । भौतिकरुपमा भेला भइएको भए त्यो बैठक रणनीतिकरुपमा गोप्य बैठक हुन्थ्यो ।
तर, सार्वजसनक सरोकारको विषय भएता पनि कतिपय सम्वेदनशील रणनीतिक कुराहरु राज्यको आफ्नो हुन्छ । त्यसकारणले जसले गरेको भए पनि त्यो भिडियो बाहिर ल्याउनु नै ‘अनइथिकल’ हो भन्ने मलाई लाग्छ । अनइथिकल मात्रै होइन, हामीसँग भइरहेको मौजुदा कानूनको विपरीत पनि हो । दोस्रो कुरा– सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले त्यो बैठकमा डब्ल्युएचओको प्रमुखले भन्ने कुरा अथवा निश्चित विज्ञ डाक्टरले भन्ने कुराहरु बोल्नुभयो ।
तातोपानीले धोएर कोराना भाइरस जान्छ कि जाँदैन, आँखाबाट सर्छ कि सर्दैन, त्यो कुराचाहिँ टेक्निकल्ली हेल्थ मिनिस्ट्रीको हेड अफ डिपार्टमेन्टले अथवा त्यो विज्ञले, भाइरोलोजिस्टले भन्ने कुरा हो । त्यो कुरा सही नै भए पनि विज्ञको मुखबाट आउनुपथ्र्यो । राज्यको मेकानिज्मले काम गरेको कुरा अनि बल्ल देखिन्थ्यो । यो कुरा सम्मानीय प्रधानमन्त्रीज्यूको मुखबाट त्यसरी फर्मल बैठकमा भन्ने कुरो होइनजस्तो मलाई लाग्छ ।
प्रधानमन्त्रीले जुन कुराहरु भन्नुभयो, त्यो सही छ कि छैन, मेडिकल्ली भन्ने कुरा हो, हामीले भन्ने कुरा होइन । कुनै सामान्य एमडी डाक्टरले पनि भन्न सक्दैन । त्यो विषयमा भाइरोलोजीको सन्दर्भमै अध्ययन गरेको व्यक्तिले आधिकारिक हिसाबले भन्नुपर्छ । नत्र भने यो कुरा डब्ल्युएचओले राखेको मापदण्डभन्दा फरक हुन सक्छ । त्यसैले यो त रिसर्चबाट प्रमाणित गरेर, वैज्ञानिक पुष्टिका आधारमा भन्ने कुरा हो यो ।
कोरोनाले प्रधानमन्त्री, मुख्यमन्त्री चिन्दैन : ओली
यस्तोबेलामा मानिसहरू डिप्रेसनमा जाने खतरा हुनसक्छ । मानसिक अवस्था कमजोर हुने, खलबलिने, चिन्ताग्रस्त हुने खतरा हुन्छ । त्रास र भयले थिचेर मान्छेलाई असहज स्थितमा पु¥याउन सक्छ । भोक, निन्द्रा नलाग्ने, काममा मन नलाग्ने, केही गर्न नसक्ने दिग्दारीको स्थिति आउन सक्छ ।
उपचार गर्दा स्वाब परीक्षण मात्रै गरेर पुग्दैन । मनोचिकित्सकहरूको पनि मद्दत लिनुपर्छ । उनीहरूबाट हामीले काउन्सिलिङको विधि पनि सिक्नुपर्छ । यस्तोबेलामा रोगका विरुद्ध लड्न सकिन्छ, कोरोनालाई परास्त गर्न सकिन्छ भन्ने भावनाको विकास गराउन सक्नुपर्छ ।
हाम्रो ध्यान उपचारतर्फ त गएको छ । तर, मनोवैज्ञानिक कुरामा जान सकेको छैन । एउटा उपचारका लागि र अर्को नआत्तिनका लागि । स्थिति भयावह छ । कहाँ कोसँग सर्छ, टुंगो हुँदैन । यसबाट सर्तक हुन काउन्सिलिङ पनि गर्नु जरुरी छ । चीनले सफलता पाइसक्यो । छिटफुट मात्रै केस छन् । जहाँबाट कोरोनाको भयावहता फैलिएको थियो, त्यो वुहान खुलिसकेको छ । जहाँ–जहाँ लापरवाही भएको छ, त्यहीँ भयावह भएको देखिन्छ ।
अमेरिकाले सुरुदेखि नै व्यवहारिक र सही कदम चालेर गएको भए यो स्थिति आउने थिएन । महाशक्तिको पनि केहीलाग्दो रहेनछ भन्ने यसबाट देखियो ।
सबै साथीहरूलाई सुरक्षित हुन आग्रह गर्दछु । यसले मुख्यमन्त्री यताउता भन्ने चिन्दैन । धेरै देशका राजकुमार चिनेन, धेरै देशका प्रधानमन्त्री चिनेन । हाम्रो प्रधानमन्त्री पनि चिन्दैन, मुख्यमन्त्री पनि चिन्दैन, मन्त्री पनि चिन्दैन ।
यो (भाइरस) निस्फ्रिकी छ । मरौंला भन्ने पीर पनि छैन । किनभने, यो जीवतत्व नै होइन । यो भाइरस लामखुट्टेजस्तो पनि होइन । उडुसजस्तो लुक्ने, उपियाँजस्तो फटक्क फड्किने पनि होइन । यसलाई कुनै डर हुँदैन । ढुंगाजस्तै हो । यसले समभाव राखेर आक्रमण गर्छ । त्यसकारण आफू पनि सतर्क बनौं ।
यो भिडियो कन्फ्रेन्सकै बसाइ पनि ठीक छैन । सामाजिक दुरीको हिसाबले कुनै पनि प्रदेशको बसाइ ठीक छैन । मन्त्रिपरिषद बैठक बस्दा हामी कम्तिमा तीन मिटर टाढा बस्छौं । अहिले मैले मास्क किन खोलेको छु भने दुबैतिरकाले लगाउनुभएको छ । म अगाडि फर्किएको छु । सामाजिक दुरी कायम गरेका छौं ।
अर्को, काम भएन, यहाँ भएन त्यहाँ भएन भनेर बाहिर जाने छ, त्यसलाई पनि रोक्छौं । त्यस्तोखालको हुनुहुँदैन । प्रशासन प्रहरी र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरू सजग हुनुपर्छ । हाम्रा निम्ति यो आर्थिक हिसाबले पनि गम्भीर धक्काका रुपमा आएको छ । भविश्यमा सचेत हुनुपर्ने विषय आएको छ । उत्पादन बृद्धिमा ह्रास ल्याउँछ । रेमिट्यान्स स्वात्तै घट्छ ।
रेमिट्यान्स पनि नआउने, उत्पादन पनि नहुने, विदेश गएका जनशक्ति विभिन्न देशमा हाय तोबाको स्थितिमा छन् । विभिन्न देशलाई त्यहाँ बसेका नेपालीहरूको राम्रो होस् भनेका छौं । भारतसँग त्यहाँका प्रधानमन्त्रीसँगै कुरा गरेको छु । भारतमा सबैभन्दा बढी असहज स्थितिमा छन् । भारत सहयोग गर्न तयारै छ ।
आपूर्ति व्यवस्थामा पनि तलमाथि पर्दैन । आपूर्ति व्यवस्था मिलाउने क्रममा पनि संक्रमण नहोस् भनेर हामीले ध्यान दिएका छौं । आधारभूत रुपमा हामी ढुक्क रहन र समस्या समाधान गर्न सक्छौं भन्ने आत्मविश्वासका साथ अगाडि बढ्नुपर्छ । व्यवहारिक, ठोस कदम चाल्ने र त्यसमा दृढता राख्ने गर्नुपर्दछ । सिंगो समाजलाई एकजुट बनाएर अगाडि बढाउनुपर्छ ।
(मुख्यमन्त्रीहरूसँगको भिडियो कन्फेरेन्समा प्रधानमन्त्रीद्वारा व्यक्ति विचार अनलाइन खबरबाट साभार)